मजदूरहरुको दु:खेसो– रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो
–नारायण ढुङ्गाना काठमाडौं । चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क...
मजदुरहरुको दुखेसो–रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो
१ वैशाख, काठमाडौं । चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भ...
nepalipatra.com . ९ महीना अघि
चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भारी बोक्ने काम शुरु ...
मजदूरहरुको दुखेसो–रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो
kharibot.com . ९ महीना अघि
काठमाडौँ । चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भारी बोक्न...
rajdhanidaily.com . १० महीना अघि
काठमाडाैं । चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भारी बोक्...
मजदूरहरुको दु:खेसो : रोगभन्दा भोक सहन गाह्रो
nayapage.com . १० महीना अघि
काठमाडौं, १ बैसाख । चैत १० गतेअघिसम्म सिन्धुलीका हरि माझीलाई दिन बितेको पत्तो हुँदैनथ्यो । दिनभर भारी बोक्यो, साँझ खाना खायो थुपुक्क सुत्यो । एकै निद्रामा बिहान झिसमिस भइहाल्थ्यो । जुरुक्क उठेपछि भ...
kendrabindu.com . १० महीना अघि
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपाली जोखिममा १ बैशाख २०७७, सोमबार ०९:४२ केन्द्रबिन्दु संवाददाता काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमामा फसेका नेपाली नागरिकलाई स्वद...